एनआरएनए विवाद झन जटिल बन्दै
सुबाश लिम्बु (काठमाडौँ डेस्क ) - शनिवार, असोज २३, २o७८ - 50
बार्सिलोना । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार पुनः पत्र लेखेपछि संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अनिश्चित भएको छ । साथै विवाद झनै जटिल मोडमा पुगेको छ ।
परराष्ट्रको पत्रमा ६५% महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्वअभ्यास अनुसार गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले पनि पूर्वअभ्यास अनुसार नै हुनुपर्ने माग राख्दै परराष्ट्रमा उजुरी दिएको थियो ।
तर संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले नयाँ कार्यसमितिले ६५% प्रतिनिधि छान्न पाउनु पर्छ भन्ने परराष्ट्रको तर्क विधान विपरित रहेको बताए ।
‘विधानको अनुसूची ६(क) मा अनुसार प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले (अर्थात ६५% मा पर्ने योग्यता भएका व्यक्तिहरूले)ले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्ने महासचिव शर्माको भनाइ छ । उनका अनुुसार ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व’ कुन कार्यसमिति हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दैन । निर्वाचनभन्दा पहिले पुरानो कार्यसमिति नै अस्थित्वमा रहेको हुन्छ ।’
परराष्ट्रको पत्रपछि प्राविधिकरुपमा जुलाईमा निर्वाचन हुन नसकेका एनसीसीहरूलाई सदर गर्ने वा बदर गर्नेबारे पनि प्रश्न उठेको छ । एनसीसीको महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १–३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनु पर्ने भन्दै परराष्ट्रले पत्रमा उल्लेख गरेपछि संघमा थप जटिलता देखिएको हो ।
अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमानलगायतका एनसीसीहरूको निर्वाचन जुलाइभन्दा पहिले वा पछि गरी सम्पन्न भएका छन् । यी देशहरुमा पुनः निर्वाचन गर्ने वा बदर गर्नेबारे अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
एनआरएनए स्रोतका अनुसार परराष्ट्रले पत्रमा बदर वा पुनः निर्वाचनबारे केहि खुलाइएको छैन । एनसीसीको महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १–३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनु पर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण अगष्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनु पर्ने भन्दै परराष्ट्रले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
‘समय पहिले वा पछि निर्वाचन भएका देशहरुमा या त पुनः निर्वाचन हुनुपर्यो वा बदर हुनुप¥यो । यसले झनै एनआरएनए विवाद जटिल मोडमा पुगेको छ,’ महासचिव डा. शर्माले भने । परराष्ट्रले विधार्थीहरु सदस्य भएका एनसीसीहरुमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्धारित मितिमा हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले परराष्ट्रको पत्रले एनआरएन विवाद झनै जटिल मोडमा पुगेको र छिट्टै सचिवालयको बैठक बसेर महाधिवेशनको मिति सार्ने बताए । उनले वार्ता र संवादबाट निकास निस्कनेमा पनि आशावादी रहेको बताए । साथै, उनले परराष्ट्रको पत्रबारे बैठकपछि नै संघले आफ्नो धाराणा राख्ने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आवस्यक देखेमा तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको मितिलाई पछि सार्न वा स्थगित गर्न सक्ने छ । तर संघको विधानमा उल्लेख गरिए अनुसार यो अवधि ६ महीनाभन्दा बढी हुने छैन ।
यस्तै, परराष्ट्रको पछिल्लो पत्रले एनआरएनए संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। एनआरएनएभित्र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै संस्थापन पक्षले आलोचना गर्दै आएको छ । आफूहरूले विधानसम्मत एनसीसी अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेको भन्दै संस्थापन पक्ष अदालतसम्म पुग्नसक्ने आकलन गरिएको छ ।
अदालत अहिले नै जाने वा पछि जानेबारे संस्थापन पक्षलाई दुईवटा विकल्प रहेको बताइन्छ । परराष्ट्रले आफ्नो सीमा र विधान बाहिर रहेर संघलाई निर्देशन दिएको भन्दै त्यसको बदरको माग राख्दै तत्काल अदालत जाने एक विकल्पको रुपमा हेरिएको छ ।
शनिवार, असोज २३, २o७८